बलिउड अभिनेत्री माल्वी मल्होत्रामाथि छुरा प्रहार - VOICE OF NEPAL
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १४:३३
बलिउड अभिनेत्री माल्वी मल्होत्राको हत्याको प्रयास भएको छ । उनलाई पेटमा छुरा प्रहार गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । चर्चित टेलिभिजन सिरियल उडानबाट परिचित अभिनेत्री माल्वीले कैयौं फिल्ममा पनि काम गरिसकेकी छिन् । अहिले उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
माल्वीलाई पेटमा छुरा प्रहार गरिएको छ । पेटमा छुरा हानिसकेपछि ती व्यक्तिले माल्वीको अनुहारमा पनि आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए । माल्वीले अनुहार हातले ढाकेर बचाउने प्रयास गर्दा उनका दुवै हातमा पनि गम्भीर चोट लागेको छ । उनलाई ३ ठाउँमा गम्भीर चोट लागेको बताइउको छ । उनलाई अहिले अम्बानी अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
आक्रमणकारीको पहिचान भइसकेको छैन । आक्रमणकारीविरुद्धवर्सोवा पुलिस स्टेसनमा मुद्दा दर्ता गरी खोजी भइरहेको छ । आक्रमण किन गरियो भन्ने पनि अहिलेसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । माल्वीले कलर्स च्यानलबाट प्रसारण हुने चर्चित शो उडानमा काम गरेकी छिन् । उनले हिन्दी फिल्म होटल मिलनसहित कैयौं दक्षिण भारतीय फिल्ममा पनि काम गरेकी छिन् ।
पोर्चुगलमा लकडाउनका कारण ५४ हजार ४०० कम्पनी बन्द , २ लाख ८१ हजार कामदारलाई ‘लेअफ’ भत्ता प्रदान !
Worst day ever since pandemic in Portugal: 10556 infected and 156 died by Covid-19 inasingle day.
चर्चित गायक शिव परियार र र्यापर अराज केशव गिरीको “मेरी लक्षिमा” सार्बजनिक
पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलोद्वारा स्वास्थ्य संकटकाल ७ जनवरीसम्म नबिकरण गर्ने प्रस्ताव !
प्रीति कौरको नयाँ गीत ‘चिम्लेर आँखा’ सार्वजनिक